ဇာတိနှင့် ၀ိညာဉ်ကြားမှ စစ်ပွဲ | Shwe Canaan TV
00Unknown Sunday, 19 June 2016
The War For Man’s Soul ကျွနု်ပ်တို့သည် တိုက်ပွဲအတွင်း၌ ရှိသည်’ ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြောပါသည်။ ကျွနု်ပ် တို့ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသည့်အခါ ကျွနု်ပ် တ...
The War For Man’s Soul
ကျွနု်ပ်တို့သည် တိုက်ပွဲအတွင်း၌ ရှိသည်’
ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြောပါသည်။ ကျွနု်ပ်
တို့ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသည့်အခါ ကျွနု်ပ်
တို့၏ စိတ်၀ိညာဉ်ထဲသို့ ဘုရားသခင်၏
စိတ်သဘော သဘာ၀ စတင် ၀င်ရောက်
လာသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ၀ိညာဉ် (Spirit)
သည် လုံး၀ဥဿုံ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
မှု ပြုရန်အတွက် စတင်သည့် အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးသည်။ သည်အခါမှာ ‘၀ိညာဉ်’ နှင့် ‘စိတ်’ အကြား လွန်ဆွဲပွဲ (သို့မဟုတ်) စစ်ပွဲက စတင်လာသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ ၀ိညာဉ်က ဘုရားအလိုတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ချင်သည်။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့၏ စိတ် (အသိစိတ်၊ ဆန္ဒစိတ်နှင့် ခံစားစိတ်)က ကိုယ့်သဘောအတိုင်း ကိုယ်လုပ်ချင်သည်။ သည်လွန် ဆွဲပွဲ (သို့) တိုက်ပွဲအကြောင်း ရှင်ပေါလုက (ဂလာတိ ၅း ၁၇) ၌ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုထားသည်။
‘အကြောင်းမူကား ဇာတိပကတိနှင့် ၀ိညာဉ်ပကတိသည် တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး ဆန့်ကျင်သောအလို ရှိကြ ၏။ တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ကျင့်ချင်သော အကျင့်ကို မကျင့်နိုင်ကြ ’ ။
ဟုတ်ပါသည်။ ယုံကြည်သူတိုင်း သည်တိုက်ပွဲနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်ကို သိရှိဖို့ အလွန်အရေးကြီး သည်။ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန် ခန္ဓာသွေးသားနှင့် ဇာတိစိတ်တို့၏ တပ်မက်မှုများနောက် လိုက်ပါဖို့ရန် သွေးဆောင် ဖြားယောင်း ခံရတာမျိုး ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိသည့် အတွေးအာရုံတွေ၊ စိတ်ဆန္ဒတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားထကြွမှုတွေ၊ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်သည်။ သည်အရာ တွေက ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ ကျိန်း၀ပ်လျက် ရှိသည့် ၀ိညာဉ်တော်နှင့် အဆက်မပြတ် စစ်ပွဲဆင်နွှဲလျက် ရှိပေသည်။
အထူးသဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ ကြုံလာသည့် အချိန်အခါမျိုးမှာ ‘ဘုရားသခင်ကို မဲပေးမလား’ ဒါမှမဟုတ် ‘ရန်သူကို မဲပေးမလား’ တစ်ခုခုတော့ ကျွနု်ပ်တို့ ရွေးချယ်ရ လိမ့်မည်။ အခြေခံကျကျ ပြောရမည်ဆိုပါက ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က ပြောသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ရွေးချယ်လျှင် ဘုရားသခင်ကို မဲ ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ငြိမ်သက်ခြင်း အကျိုးကို ခံရလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် မိမိဇာတိအလိုဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့လျှင် ရန်သူကို မဲ ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ဖို့သာ ရှိတော့သည်။
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ ပါ။ အပြစ်နှင့် မဟုတ်
(Fellowship with the Father – Not Your Sin)
‘အပြစ်သည် သေဆုံးခြင်း မရှိ။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့သည် အဖြစ်အတွက် သေဆုံးနေသူ ဖြစ်ရ မည်’ ဟူသော အသက်တာကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် သမ္မာတရားတစ်ခုကို ကျွန်မ တွေ့ ရှိခဲ့သည်။ သည်သမ္မာတရားကို (ရောမ၊ ၆း ၁၀-၁၁)၌ တွေ့ ရှိနိုင်သည်။ ‘ခရစ်တော်သည် အသေခံတော် မူရာမှာ ဘုရားသခင်အဖို့ (ခမည်းတော်နှင့် အဆက်မပြတ် မိတ်သဟာယဖွဲ့ ဖို့) ရှင်တော်မူ၏။ ထိုနည်း တူ သင်တို့သည် အပြစ်တရားနှင့်ဆိုင်သော အရာ၌ကား အသေဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဘုရားနှင့် ဆိုင်သောအရာ၌ကား၊ ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အသက်ရှင်သည် ဟူ၍လည်ကောင်း၊ ကိုယ်ကို ကိုယ် ထင်မှတ်ကြလော’။
စိတ်၀င်စား ဖွယ်ရာပင်။ မိတ်သဟာယဖွဲ့ ခြင်း ဟူသောစကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ရင်းနှီးကျွမ်း၀င် သော သူနှစ်ဦး အတူရှိခြင်း၊ အပြန်အလှန် တွဲဖက်ခြင်း၊ ပေါင်းဖော်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်နှင့် ကျွနု်ပ် သည် ခမည်းတော်ဘုရားနှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ လျှင်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် အပြစ်နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ လျှင်ဖွဲ့ တစ်မျိုးမျိုးသော လုပ်ဆောင်နိုင်ပေသည်။
သို့ဆိုလျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်နှင့် မည်သို့မိတ်သဟာယဖွဲ့ သနည်း? ကျွနု်ပ်တို့၏ ကျဆုံးမှု များကိုသာ အာရုံစူးစိုက်နေလျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ နေပြီ ဖြစ်သည်။ ထပ်မံရှင်း ပြပါမည်။ ကျွနု်ပ်တို့အနေနှင့် မှားယွင်းခဲ့သည့် အပြစ်အတွက် နောင်တရပြီ ဖြစ်သော်လည်း မိမိမှား ယွင်းခဲ့သည် အပြစ်အပေါ်၌သာ ဆက်လက်အာရုံစူးစိုက်နေပါက ဘုရားသခင်၏ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်နေခြင်းသဘော သက်ရောက်သည်။ သည်အရာသည်ပင် အပြစ်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။ သည်စကားက ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းလှသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း အမှန်တရားပင် ဖြစ် သည်။
ကျွန်မ အပြစ်တစ်ခု လုပ်မိခြင်းသည့်နောက် ဘုရားသခင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းလျှောက်ခဲ့သော် လည်း ထိုအပြစ်အကြောင်း ပြန်စဉ်းစား၍ ၀မ်းနည်းနေမိသည့် အကြိမ်ပေါင်း မည်မျှရှိကြောင်း ကျွန်မ သင့်ကို ပြောမပြနိုင်တော့ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ ဖို့ရန် မထိုက်တန်ဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံစားနေမိ၏။ စာတန်က ကျွန်မနား ကပ်ပြီး - ‘ဒီမှာ -မင်းက အပြစ်ကျူးလွန်ပြီး ဘယ်လို ဘုရားနဲ့ မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ နိုင်မလဲ’ လို့ ပြောသည်။ ကျွန်မ စာတန်စကားကို နားယောင်ပြီး ဘုရားနျင့် မိတ်သ ဟာယ ဖွဲ့ ဖို့အတွက် ထိုက်တန်သော သူတစ်ဦးဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေမိ၏။ သို့သော်လည်း ကြိုးစားသမဆ သဲရေကျသာ ဖြစ်ခဲ့ရ၏။ ကျွန်မအတော်လေး စိတ်သက်သာရာ ရလာသည့် အချိန်မှာပဲ နောက် အမှားတစ်ခုကို ကျူးလွန်မိ ပြန်သည်။ သည်လိုနဲ့ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကြီးနဲ့ပဲ တ၀ဲလည် လည် ရှိနေခဲ့ရသည်။
ကျွန်မ တစ်သက်တာမှာ မေ့မရနိုင်သည့် နေ့တစ်နေ့လို့ပဲ ပြောရမလား။ ဟုတ်ပါသည်။ တစ်မနက် ကျွန်မ ခုံပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြသနာတွေ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့် အရာတွေအကြောင်း စဉ်းစားနေမိသည်။ သည်အချိန်မှာ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ် တော် ဘုရားက စကားပြောလာသည်။ ‘JOYCE ရယ်၊ မင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ ကျဆုံးမှုတွေနဲ့ပဲ မိတ်သဟာယဖွဲ့ နေမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ငါနဲ့ မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ မှာလည်း’။
အဲသည်နေ့မှာပင် ကျွန်မ နားလည်သဘောပေါက် လိုက်သည်။ ကျွန်မတို့သည် ကိုယ်တော့် အတွက် ပြသနာတုံးတွေ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မတို့၏ နေ့စဉ် စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်းတွေ ကို ကျွန်မတို့မပြုမီကပင် ကိုယ်တော်က ကြိုတင်သိပြီး မှတ်တမ်းတင်ထား ပါသည်။ (ဆာ၁၃၉း၂ ၊ ၄ ၊ ၁၆)ကိုကြည့်ပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း ကိုယ်တော်က ကျွန်မတို့၏ အခြေအနေကို မကြည့်ဘဲ ကျွန်မတို့အား ချစ်မြတ်နိုးဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့၏ တာ၀န်မှာ ကိုယ်တော်၏ မေတ္တာနှင့် လက်ခံပေးမှုကို ရွေးချယ် ရယူဖို့သာ ဖြစ်ပြီး ထိုက်တန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ရန် ကြိုးစားနေမှုကို ရပ်စဲပစ်လိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်သည်။
သင်၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သင်၏ အပြုအမူကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်
(When You Change Your Focus, You’ll Change Your Behavior)
သင့်အနေနဲ့မေးကောင်းမေးမည်။ ဒီမှာ Joyce ကျွန်တော့်အပြုအမူတွေ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင် ပြုပြင် ရမယ်ပာုတ်လား၊ ပာုတ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်လို့သင့်ရဲ့ ကျရှုံးမှုတွေ၊ အားနည်းချက်တွေကိုပဲ အာရုံစူးစိုက် နေလျင်တော့ အခြအနေက ဆိုးသထက် ဆိုးလာဖို့သာ ရှိသည်။ သင်၏ အာရုံစူးစိုက်မှုအတိုင်း သင်၌ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေမည်။ (Where your attention goes, the power flows) သည် အရာကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားပါ။
မိမိရဲ့ အားနည်းချက်တွေနဲ့ ပဲ မိတ်သဟာယဖွဲ့ နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ကျွနု်ပ်တို့ ဆက်လက် ကျရှုံးနေမှာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသာ အာရုံပြု ထားမည်။ ခရစ်တော်၌ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်သည်ဟု ခံယူပြီး ကိုယ်တော်နှင့် ဆက်လက် မိတ်သဟာယဖွဲ့ နေလျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်စွာ ပြုကျင့်ဖို့ အစပြုမိပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ဘာတွေ မှားခဲ့သလဲ? (သို့) ကျွနု်ပ်တို့အား ဖြားယောင်းသွေးဆောင်တတ်သည့် အဖြစ်ကိုပဲ ဆင်ခြင်နေဖို့ မဟုတ်။ ကျမ်းစာက ‘ကျွနု်ပ်တို့ကို ကျဆင်းစေသည့် အရာမှန်သမျှကို မကြည့်ဘဲ ယုံ ကြည်ခြင်းကို အစဦးစီရင်၍ စေ့စပ်စုံလင်စေတော်မူသော သခင်ယေရှုကိုသာ စေ့စေ့ထောက်ရှုရမည်’ ဟု ပြောထားပါသည် (ဗြဲ၊ ၁၂း ၂)။
ကျွနု်ပ်တို့၏ ခွန်အားဖြင့် ဇာတိစစ်ပွဲကို အောင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်မပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ တကယ်ပဲ ကျွနု်ပ်တို့ ကိုယ်ကို ကျွနု်ပ်တို့ မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အစွမ်းတန်ခိုး ကို ဘုရားသခင်ကသာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ တာ၀န်ကား ထိုဘုရားသခင်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သာ ဖြစ်တော့်သည်။ (ဖိလိ၊ ၂း ၁၂-၁၃ကို ကြည့်ပါ) ကျွနိုပ်တို့၏ အားနည်းချက် များကို အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားခြင်း၊ ကိုယ်တော်၏ ပြုပြင်ပေးမှုကို ယုံကြည်ခံယူခြင်း၊ မှန်ကန်သည့် ရွေးချယ်မှုတွေပြုဖို့ ကိုယ်တော့်ထံမှ ဉာဏ်ပညာနှင့် ခွန်အားကို တောင်းခံခြင်း၊ သည်နည်းလမ်းတွေမှ လွဲ၍ အခြားနည်းလမ်း မရှိပေ။
သင်၏ စိတ်နှလုံးနှင့် နှုတ်ကို သမ္မာတရားနှင့် ဖြည့်ပါ
(Fill Your Mind and Mouth with Truth)
ကဲ - ဟုတ်ပါပြီ။ ကျွနု်ပ်တို့ အပြစ်လုပ်မိသည့်အခါ ဘာဆက်လုပ်ရမည်နည်း? ဟုတ်ကဲ့၊ နှုတ်ကပတ်တော်က ပြောသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ ချဉ်းကပ်ပါ။ မှားခဲ့မိသည့်အရာတွေအတွက် ၀န်ချတောင်းပန်ပါ။ ကိုယ်တော်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဆေးကြောပေးခြင်းကို တောင်းခံပါ။ ပြီး ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လက်ခံပါ။ ပြီးသည့်နောက် ဆက်လက်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ ပါ။
ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို ကျွန်မ (၂၈)နှစ်လုံးလုံး အားကြိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်ခြ့ပါသည်။ သို့ပေငြားလည်း ယခုအချိန်ထိ ကျွန်မမှာ အားနည်းချက်တွေ၊ ကျရှုံးမှုတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သည်အရာတွေအပေါ်မှာ အာရုံမဲပုဖို့ ကျွန်မ သင်ယူခဲ့ရပြီးပြီ။ နှုတ်ကပတ်တော်က ပြောသည့် အတိုင်းပင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျွန်မ ၀န်ခံပါသည်။
‘ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ ကျွနု်ပ်သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောသူ၊ ရွေးချယ်ခွဲထားသောသူ ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ဘိသိက်ပေးခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံရသောသူ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော့်ထံတွင် ကျွနု်ပ်အတွက် အကောင်းဆုံးသော အကြံအစည် ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲရမည့်အရာ များစွာရှိသည်။ သည်အရာတွေကို ကျွနု်ပ်ခွန်အားနဲ့ မပြောင်းလဲနိုင်။ ကျွနု်ပ်သည် ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် မျက်မှောက်တော်ထဲ၌ အသက်ရှင် နေသည့်အတိုင်း ကျွနု်ပ်အား ဘုန်းကြီးခြင်းတစ်ခုမှ တစ်ခသို့ ပြောင်းလဲစေရန် ကိုယ်တော် လုပ်ဆောင် နေသည်’။
သည့်နောက်မှာ ကိုယ်တော် ကျွန်မကို ပြောင်းလဲပေးနေကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ချဖို့နှင့်၊ တစ်ပါး သူတွေရဲ့ အကျိုးကို ပြုစုပေးသူဖြစ်ဖို့ ကိုယ်တော့်ထံမှ ခွန်အားတောင်းခံပါသည်။ အခြားသူများ အတွက် ကောင်းသောအမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းသည်လည်း ကျွနု်ပ်တို့၏ ဆိုးသွမ်းသော ဇာတိစိတ်၊ ဆန္ဒများအား အောင်မြင်စေသည့် နောက်ထပ် သော့ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ရောမသြဝါဒစာ အခန်းကြီး ၆၊ ၇၊ ၈ ကို အကြိပ်ကြိမ် ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ ကျွန်မ သင့်ကို လေးလေးနက်နက် တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။ ထိုနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာ ဖော်ပြထားသည့် ခရစ်တော်၌ရှိသော သင်၏ အရိုက်အရာ၊ အခွင့်အရေး၊ စတာတွေကို သင် နားလည်သဘောပေါက် လာသည်နှင့်အမျှ အပြစ်တရား၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းမှ အစဉ်လွတ်ကင်းပြီး လွတ်မြောက်ခြင်း အစစ်အမှန်ကို လက်တွေ့ ကျကျ ရရှိခံစားရမယ်ဆိုတာ သိပ်ကို သေချာလှပါသည်။
Source: The War For Man’s Soul By Joyce Meyer; Enjoying Everyday Life; 0ct, 2004.
Shwe Canaan TV: ဇာတိနှင့် ၀ိညာဉ်ကြားမှ စစ်ပွဲ